Haweeney shaqada looga eryay markii ay xaadirtay kulan uu ciyaarayay xulka England Koobkii Euro 2020 & Sababtii keentay arrintaasi? – Gool FM
Haweeney shaqada looga eryay markii ay xaadirtay kulan uu ciyaarayay xulka England Koobkii Euro 2020 & Sababtii keentay arrintaasi?
(London) 13 Luulyo 2021. Qisadan cajiibka ah ee ka dhacday tartankii Qarammada Yurub ee dhowaan la soo geba-gebeeyay, waxaana Haweeneydani ay shaqadeedii ku weysay kaddib markii ay u daawasho tagtay kulan ciyaareed tartankii Euro 2020.
Haweeney taageere u ah xulka Ingiriiska ayaa shaqadeedii ku weysay markii ay Kaamirooyinku qabteen, iyadoo daawaneysay ciyaartii nus dhammaadka Koobka Euro 2020 oo garoonka Wembley ay ku wada dheeleen xulalka Ingiriiska iyo Denmark.
Arrintan ayaa timid kaddib markii haweeneydan oo lagu magacaabo Nina Farooqi oo 37-jir ah ay sheegtay in ay xanuunsan tahay oo aysan imaan karin shaqadeedii, waxaana taa beddelkeedii ay tikidh u goosatay kulankii Ingiriiska iyo Denmark si ay u taageerto xulkeeda England, hase yeeshee Kaamirooyinkii garoonka ayaa qabtay Nina iyo saaxiibteed oo u dabaal degayay goolkii koowaad ee Ingiriisku dhaliyay kulankaas.
Iyadoo ka sheekeynaysay Nina Farooqi dhibaatadii qabsatay ayaa waxay tiri: “Markii ay dhammaatay qaybtii hore ee ciyaartii Ingiriiska iyo Denmark saaxiibadaydii shaqada ayaa farriimo ii soo diray, iyagoo i leh waan ku aragnay adigoo daawanaya ciyaarta.”
Maalinkii Khamiistii ahaydna waxaa Nina Farooqi u soo dhacday farriin kale oo kaga timid Maamuleheedii shaqada oo ku yiri: “Waxba ha is dhibin Gurigaaga iska joog shaqada way kaaga dhammaatay”.
Dhacdooyin cajiib ah oo fara badan ayaa lagu xasuusan doonaa Koobkii qarammada Yurub ee Euro 2020, kaasoo xulalkii loo saadaalinayay ay gaari waayeen kama dambeysta tartanka, bal adigana aqriste inoo sheeg wixii kuugu yaabka badnaa ee aad ku aragtay Koobkii Euro 2020 ee dhowaan la soo gabagabeeyey.
RASMI: Xiriirka CONMEBOL oo shaaciyay 11-kii laacib ee ugu wanaagsanaa tartanka Copa America